Iji 3D Video Ihe Ntụgharị Pro ị nwere ike tọghata vidiyo 2D gị n'ime 3D | Esi m mac
Iji 3D Video Ihe Ntụgharị Pro ị nwere ike tọghata vidiyo 2D gị n’ime 3D
Ihe nkiri mbụ batara na sinima na 3D bụ mgbanwe site na otu ụzọ anyị ga-esi nwee ọ enjoyụ sinima, yana ịbụ nkwarụ mgbe a bịara izere izere ohi. N'oge na-adịghị anya, ndị nrụpụta kachasị malitere ịmalite igwe onyonyo kwekọrọ na teknụzụ a nke, ekele maka iko, mere ka anyị nwee ọ enjoyụ ụdị ọdịnaya a. Ma oge na-aga, ha abụọ Mmasị nke ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta rụpụtara ọ dịkwa obere ihe banyere ya. Oge ọ bụla na ihe nkiri 3D na-akụ ihe nkiri, mana enwere ike ịgụta ya na mkpịsị aka nke otu aka. Ndị na-emepụta ihe akwụsịkwala ịkụ nzọ na teknụzụ a na afọ abụọ gara aga ha emebeghị ụdị ọ bụla.
N'agbanyeghị nke ahụ, ekwesịrị m ikweta na mmetụta ya na-aga nke ọma maka televishọn na ọtụtụ n'ime gị nwere ike iche dị ka m. Ugbu a ọ na-esiri ike ịchọta ihe nkiri na usoro a, ya mere a manyere ọtụtụ ndị ọrụ iji tọghata ihe nkiri kachasị amasị ha na 3D site na iji ngwa dị iche iche. 3D Video Ihe Ntụgharị bụ otu n'ime ha, ngwa nke nwere ego mgbe niile nke euro 9,99 Mana ọ dị ugbu a maka nbudata maka obere oge site na njikọ m hapụrụ na njedebe nke isiokwu a.
3D Vide Ihe Ntụgharị-enye anyị ohere iji tọghata anyị 2D videos ka 3D anaglyph usoro. Usoro anaglyph na-enye anyị ohere ị contentụ ọdịnaya 3D na televishọn ndị a na-ejikarị iko na igwe na-acha anụnụ anụnụ na nzacha uhie, dịka e mere n'oge gara aga. 3D Video Ihe Ntụgharị dakọtara na ọtụtụ formats Otu n'ime nke anyị hụrụ: AVI, MPEG, H.264 / MPEG-4, DivX, XviD, AVCHD Video (* .mts, * .m2ts), H.264 / MPEG-4 AVC (* .mp4), MPEG2 HD Video (* .mpg; * .mpeg), MPEG-4 TS HD Video (* .ts).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Iji 3D Video Ihe Ntụgharị Pro ị nwere ike tọghata vidiyo 2D gị n’ime 3D
Dị ikpeazụ nke Plex Cloud bịara, iji kpọọ ọdịnaya site na Dropbox na nyiwe ndị ọzọ
Chedo MacBook 12 nke anụ ọhịa gị na Incase Ariaprene Classic Sleeve